အနုပညာရှင်တွေနဲ့ မီဒီယာတွေအကြား အဆင်မပြေမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းအပေါ် သရုပ်ဆောင်လူမင်း သုံးသ? - Yangon Media Group
အနုပညာရှင်တွေနဲ့ မီဒီယာတွေအကြား အဆင်မပြေမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းအပေါ် သရုပ်ဆောင်လူမင်း သုံးသ?
ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၃- လတ်တလောတွင် အနုပညာရှင်တွေနဲ့ မီဒီယာတွေအကြား အဆင်မပြေမှုများဖြစ်ပေါ်နေခြင်းအပေါ် စည်းကမ်းတကျလေးလုပ်ကိုင်ပါက နှစ်ဦးနှစ်ဖက် စိတ်ခုစရာများ မရှိနိုင်ဘူးလို့ သရုပ်ဆောင်လူမင်းက ပြောပါတယ်။
လတ်တလောမှာဆိုရင် ရုပ်ရှင် Press Show ပြသပွဲတွေ၊ တခြားသော အနုပညာပိုင်းဆိုင်ရာ စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲတွေမှာ မီဒီယာတွေအနေနဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးချင်းစီကို အင်တာဗျူးခွင့် မရှိတဲ့အနေအထားကို ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့်မို့လို့ အနုပညာရှင်တွေနဲ့ မီဒီယာတွေအကြား မှာ အဆင်မပြေမှုတချို့ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူမင်းက ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
”အခုတလောမှာဆိုရင် မီဒီယာတွေနဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေကြား မှာဖြစ်နေတဲ့ အင်တာဗျူးခွင့်ပြုတာတွေ မပြုတာတွေနောက် အင်တာဗျူးအတွက်အခကြေးငွေယူတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ပွဲမှာဆိုရင် ပွဲမစခင်မှာ အင်တာဗျူးလုပ် တယ်။ မုန့်စားကြတယ်။ အဲဒီအခါကျတော့ ပွဲကတော့ မစသေး ဘူး။ ပြီးသွားပြီ။ နောက်ဆုံးအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ အခမ်းအနား အစီ အစဉ်က အခမ်းအနားမစရသေးဘူး။ စားပြီးသွားကြပြီ။ အစီအစဉ် တကျလေးတော့ ဖြစ်စေချင်တယ်။ စည်းကမ်းလေးနဲ့တော့ လုပ် စေချင်တာ။ အစီအစဉ်လေးနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ နှစ်ဖက်စလုံး လည်း စိတ်ထဲခုနေစရာတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်”လို့ပြောပါတယ်။
သူကဆက်လက်ပြီး” ဒီဘက်ခေတ်မှာဆိုရင် မီဒီယာတွေက အရမ်းများလာတဲ့အခါကျတော့ ပွဲတစ်ခုမှာ ကျွန်တော်တို့ကို အင် တာဗျူးတာက အွန်လိုင်းမီဒီယာတွေ၊ ရုပ်သံတွေကဆိုရင် သူ့တို့ ရဲ့တံဆိပ်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့ တစ်ဦးတည်းပဲ မေးတာမျိုးတွေရှိ ပါတယ်။ အဲဒီအခါကျတော့ ပွဲမှာလာတဲ့ မီဒီယာအယောက် ၂ဝ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က ဒီမေးခွန်းဒီအဖြေကိုပဲ အယောက် ၂ဝ စာ ဖြေပေးနေရတဲ့အခါက သေပြီပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ အနုပညာရှင်တွေလည်း အဲဒီအခါကျတော့ ကျွန်တော်တို့က ပြောပါတယ်။ မီဒီယာတွေပေါင်းပြီးတော့ မေးပေးကြပါ။ ကိုယ့်မီဒီယာဌာနကို ကိုယ်စားပြုတဲ့တံဆိပ်လေးတွေ တစ်ခုချင်းစီပါခြင်း၊ မပါခြင်းကိုတော့ အဲဒီလောက်အထိ လိုက်ကြည့်မနေပါနဲ့တော့ပေါ့နော်”လို့ ဆိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မီဒီယာတွေနဲ့ အနုပညာရှင် တွေရဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာ မိသားစုသဖွယ်ဖြစ်နေခြင်း ကြောင့် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးနားလည်မှုနဲ့အလုပ်လုပ်ပါက အဆင်ပြေနိုင်တယ်လို့လည်း ¤င်းကပြောပါတယ်။
”ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာက မီဒီယာတွေနဲ့ အနုပညာရှင် တွေရဲ့ ဆက်ဆံမှုက တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့မတူပါဘူး။ ရင်းနှီးမှုကို အခြေတည်ပါတယ်။ မျက်နှာတွေကိုကြည့်ပါတယ်။ ခင်မင် ရင်းနှီးစွဲလေးတွေနဲ့ ထောင်းသာထုသာအခြေအနေလေး တွေကြုံလာရင်လည်း ထောင်းတာ ထုတာလေးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်လေးတွေပေါ့ နော်။ အခုလိုပြောတယ်ဆိုတာကလည်း မိသားစုလိုနေ လာကြတာဖြစ်တဲ့အတွက် အခုလိုမျိုးပြောတာပါ”လို့ ¤င်းက ဆက်လက်ပြောပါတယ်။
သရုပ်ဆောင် ရဲမင်းပိုင် မြန်မာပြည် ပြန်လာတော့မည်
''သီချင်းထက် သရုပ်ဆောင်ပိုင်းကို ပိုလုပ်ချင်နေတယ်'' ဆိုတဲ့ သရုပ်ဆောင်/အဆိုတော် ခြူးစစ်ဟန်
ဂိမ်းအမြန်ဆုံး ပြီးအောင် ကစားခြင်းဖြင့် မန်ယူမှ တန်ဇာဘီ ဂင်းနစ် စံချိန်တင်
EU က ရုရှားပိုက်လိုင်း အရေးကိစ္စကို ပိုမိုတင်းကျပ်သည့် စည်းမျဉ်းချ မှတ်ရန် သဘောတူ
စံချိန်တင်မြင့်တက်နေသည့် ဒေါ်လာဈေးကြောင့် မြန်မာ့ရွှေဈေး တစ်ကျပ်သား ကျပ် ၉၅၆ဝဝဝ ထိရောက်
မြန်မာ့ပြောင်းဆန်ဈေးနှုန်း ယခင်နှစ်ထက် ကျဆင်း
ယီမင်စစ်ပွဲအတွင်း ဆော်ဒီ အာရေးဘီးယားနှင့် မဟာမိတ်များထံ အနောက်နိုင်ငံများက လက်နက်ရောင်းခ?